Fifehezan-tena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > fifehezan-tena
Ka lazao fotsiny hoe tsia? Manana sipa aho. Jimmy no anarany. Tia azy ny olona rehetra. Mafy be izy sady malala-tanana ary manana hatsikana be. Saingy manana olana i Jimmy. Izy dia nandehandeha tamina lalam-pifamoivoizana iray rehefa nisy fiara nandona teo alohany. Jimmy dia namely ny akora ary nanenjika ilay mpamily mpirehareha. Rehefa nijanona teo amin'ny jiro mena ny mpamono olona dia voatery nametraka ny brakes i Jimmy. Nony nivoaka izy ary nirehitra tamin'ilay fiara teo alohany, dia nikapoka ny varavarankely amin'ny sisiny, nametaka ny sandriny nivadika tamin'ny varavarankely tapaka, ary niasa ilay mpamily nanafintohina azy. Fa vetivety ihany ilay valifaty. Tampoka teo dia nandray ny tratrany i Jimmy ary niankohoka tamin'ny tany. Tsy maintsy nandalo fandidiana dimy lehibe tao am-pony tao anatin'ny iray ora izy. Tsy mahafehy tena i Jimmy. Ny ankamaroantsika dia mahatsapa toy izany ihany. Tsy voatery ho tezitra izany, fa manapotika foana izany - tahotra, mangidy, fitsaram-po, fialonana, fireharehana, faniriana, fanararaotana zava-mahadomelina, famindram-po ary fitsiriritana.
Ao amin’ny Ohabolana 25,28 Oharina amin’ny mandan’ny tanàna ny fifehezan-tena ary mampitandrina antsika ny amin’ny loza ateraky ny filàna sy ny filan’ny nofo ny andinin-teny: “Ny olona tsy mahatana fahatezerana dia tahaka ny tanàna malalaka tsy misy manda”. Nisy tanàn-dehibe tamin’ny andro fahiny, mba hiarovana ny olom-pirenena amin’ny fanafihan’ny fahavalo, ny biby mampidi-doza, ary ny mpanafika hafa tsy nirina. Rehefa resy ireo fiarovana mafy ireo, dia navela tsy nisy mpiaro ny olona - toy ny antsika rehefa tsy voafehintsika ny fihetseham-pontsika sy ny faniriantsika. Rehefa avelantsika hifehy antsika ny faniriantsika feno fitiavan-tena, dia manokatra varavarana ho amin’ny lainga, fanevatevana, fankahalana, aretina, henatra, ary mety hiteraka fahavoazana lehibe eo amin’ny fiainan’ny hafa isika.1,23). Inona no valin’ny hoe afaka mijoro hanohitra ny faniriantsika manimba?
Fifehezan-tena? Tsitrapo? Miezaha mafy? Lazao fotsiny hoe "tsia"?
Ny Testamenta Vaovao dia manome antsika fanazavana lehibe momba ny fomba handresena ny ady ho amin’ny fifehezan-tena. Ny fifehezan-tena dia vokatry ny Fanahy Masina (Galatiana 5,22-23). Tsy ny asa mafy ataontsika, na ny fifehezan-tena, na ny fahavononantsika, satria ny fifehezan-tena dia avy amin’ny Fanahy Masina ao anatintsika. Izy no loharano. Ny teny hoe 'fifehezan-tena' dia midika hoe 'mifehy' na 'mihazona zavatra'. Ny Fanahy Masina dia manome antsika ny fahafahana anaty hifehy tena sy hiaina amin’ny fomba izay tsy anjakan’ny fihetseham-pontsika sy ny faniriantsika feno fitiavan-tena (2. Timoty 1,7). Tsy afaka miteny samirery akory isika hoe “tsia”. Nanoratra i Titosy fa ny fahasoavan’Andriamanitra dia mampiseho antsika handà ny filan’izao tontolo izao ary hiaina amim-pahendrena sy amim-pahamarinana eto amin’izao tontolo izao (Titus). 2,11-12). Saingy ny Fanahy Masina dia tsy manampy antsika hanohitra fahazaran-dratsy fotsiny. Miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina mba hanova ny tenantsika ary manolo ny fientanam-po feno fitiavan-tena amin’ny fiainan’i Jesoa Kristy izay manainga fanahy sy mahery. Mampiasa fifehezan-tena isika rehefa manapa-kevitra - tsikelikely - (tsy mandray ny safidintsika malalaka ny Fanahy Masina) hanaiky izany ho loharanon'ny fiainantsika fa tsy hiaina araka izay tiantsika. Rehefa manao izany isika dia ho lasa tahaka an’i Kristy ny fitondran-tenantsika. Ny takamoa elektrika dia manondro fa misy herinaratra - isika dia manondro fa i Jesoa Kristy no mitondra ny fiainantsika.
Ahoana no ahafahantsika mifehy tena? Nasehon’i Jesosy amintsika fa nisy drafitra foana momba ny tokony ho toetry ny olona. Tsy namela ny tenany hotarihin’ny filany izy satria niantehitra tanteraka tamin’ny rainy. Amin’ny alalan’ny ady ara-panahy sarotra indrindra fony i Satana nitsapa an’i Jesosy tany an’efitra, dia mahazo ny fomba fiasan’ny fifehezan-tena isika. Rehefa avy nifady hanina 40 andro i Jesosy, dia reraka sy irery ary noana. Tsapan’i Satana hoe inona no tena nilain’i Jesosy, ka nanararaotra io fahafahana io mba hanandrana izay tena nilainy, dia ny sakafo. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no iveloman’ny olona, ​​fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra (Matio. 4,4). Hitantsika ao amin’ny tenin’i Jesosy ny fanalahidin’ny fanofanana ny fanahintsika amin’ny alalan’ny fitoeran’ny Fanahy Masina.
Ny tahiry anatiny
Ao amin’ny Salamo 119,11 Manazava toy izao ny mpanao salamo: “Tadidiko ato am-poko ny teninao, mba tsy hanotako aminao”. Tsy maintsy miorina ao am-pontsika ny tenin’Andriamanitra. Tsy ampy ny mitahiry izany amin'ny kahie na amin'ny programa informatika. Tsy maintsy ao anatintsika izany. Ny teny hoe “tehirizina” dia nampiasaina rehefa nafenina na notehirizina mitokana ny harena na kojakoja mba hiomanana amin’ny loza ho avy. Mitahiry ny tenin’Andriamanitra isika amin’ny alalan’ny fanaovana izay toa hafahafa amin’ny sofina maoderina – ny fisaintsainana ara-baiboly. Ny fisaintsainana dia ny fandinihana, ny fisainana, ny fihainoana, ny fanetren-tena ary ny famelana imbetsaka ireo andalan-tsoratra ao an-tsaina hamakivaky ny soratra masina toy ny alika mikiky taolana. Ny fisaintsainana dia ahafahantsika mitazona ny tenin’Andriamanitra amin’izay misy fiantraikany lehibe indrindra eo amin’ny fiainantsika - ao am-pontsika (Ohabolana). 4,23). Ireo izay tsy miraharaha ny Baiboly dia mamela ny fomba fisainan-dratsy taloha sy ny fahazarana tsy voafehy manimba mba hahazoany fahefana indray. Rehefa mameno sy mamahana ny saintsika amin’ny Soratra Masina isika ka avelantsika hamaka ao am-pontsika, dia lasa ampahany amintsika ny Tenin’Andriamanitra ary miseho ho azy amin’ny fitenintsika sy ny ataontsika.
Ao amin’ny Efesianina 6,17 Nampitahain’i Paoly tamin’ny sabatra ny tenin’Andriamanitra: “Raiso ny sabatry ny Fanahy, dia ny tenin’Andriamanitra”. Azo inoana fa nieritreritra ny sabatra fohy nataon’ireo miaramila i Paoly, izay teny amin’ny lehilahiny foana — vonona hampiasaina amin’ny fotoana rehetra. Manampy antsika hahatsiaro mazava tsara ny soratra masina ny Fanahy Masina4,26) amin’ny alalan’ny fandraisan’anjaran’ireo andinin-teny izay tazonintsika ao am-pontsika amin’ny alalan’ny fisaintsainana ary manampy antsika amin’ny vonjy taitra izy amin’ny alalan’ny fampandrenesana teny iray ao an-tsaintsika na amin’ny fampahatsiahivana antsika amin’ny fomba mahagaga ny andininy na fampanantenana.
Noforonin'Andriamanitra amin'ny fifandeferana sy fihetseham-po ary faniriana isan-karazany isika. Ireo rehetra ireo dia tsy maintsy fehezina na hanjaka amintsika amin'ny farany. Ny fifehezan-tena dia ampitahaina amin'ny mpandefitra orkestra symphony. Eo ambanin'ny tarehin-jaza iray, mpitendry mozika talenta marobe dia afaka milalao ny firaketana an-tsoratra tsara amin'ny fotoana mety sy amin'ny taham-peo havanana amin'ny zavamaneno amin'ny fomba izay toa mihetsika ny zava-drehetra. Ny faniriantsika sy ny faniriantsika dia voamarina ihany koa. Ny fifehezan-tena dia mpiasan'ny Fanahy Masina ao am-pontsika, ary eo ambany fitarihan'ny fitarihana mahay no mijanona ao amin'ny toerana mety sy miantso amin'ny fotoana mety. Ny hoe mifehy tena dia midika hotarihin'ny Fanahy Masina.
Vavaka: Raiko ô, maniry mafy ny hanana fiainana mahafehy tena aho, nefa tsy ho vitako izany raha tsy misy anao. Misaotra anao aho fa efa nomenao ahy izay rehetra ilaiko mba hananako fiainana ankasitrahanao (2. Petrus 1,3). Mba fenoy hery anaty aho amin’ny alalan’ny fanahinao (Efes 3,16), mba ahafahako mampiasa amim-panajana ny fahaizana nomenao! Tandremo ny vavako ary ampaherezo aho mba tsy ho resin'ny filan'ny nofo3,14). Omeo hery aho hanao zavatra amim-pahamalinana sy ho tena maha-izy ahy - zanakao (1. Johannes 3,1). eo an-tananao aho Miaina ao anaty sy amin'ny alalan'ny ahy izao. Amin’ny anaran’i Jesosy, amena.
Fifehezan-tena sy fifehezan-tena
Ireo teny roa ireo dia tsy tokony hafangaro. Ny fifehezan-tena dia avy amin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ao amintsika, fa ny fifehezan-tena dia mazàna mampihatra amin'ny lafiny ivelany - sakafo na fanatanjahan-tena. Matetika isika dia manaiky ny fitsipika na ny fitsipika izay heverintsika fa ilaina mba hanaraka ny fotoana fohy.